के हाे टिमुर? यसबाट कति कमाउन सकिन्छ ?
टिमुर (Nepali Pepper/Sichuan pepper)नेपालमा पाइने एक किसिमको फल हो। मीठो स्वाद र बासना हुने टिमुर लोकप्रिय नेपाली मसलाको रूपमा परिचित छ। टिमुर हिमालयखण्डको पश्चिम जम्मुदेखि पूर्व भुटानसम्म १००० मिटरदेखि २५०० मिटर उचाइ सम्मका ठाउँहरुमा पाइएको छ । यो साखिया पहाडको ६०० देखि १८०० मिटरसम्म र उडिसाको पूर्वीघाट र आन्द्र प्रदेशको १२०० मिटर सम्मको भागमा पनि पाइन्छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपमा उच्च पहाडी भाग र महाभारत क्षेत्रको ९०० मि. देखि २५०० मि. सम्म राम्रो सप्रिएको पाइन्छ ।
यो २ देखि ६ मिटरसम्म अग्लो हुने पतझड, काडेदार, सुगन्धित झाडी वर्गको बनस्पती हो । यसको काण्ड र पातको फेदमा चेप्टा २ से.मी. जति लामा काडा हुन्छन्। यसको पात पलाउने हरेक आख्लावाट फुलेको छुट्टै हाँगा निस्किएको हुन्छ । यसको भाले र पोथी फूलफरक फरक विरुवामा हुन्छ । फुलमा पत्रदल हुदैन । फल सानो ४ देखि ५ मिलिमिटर ब्यास भएको झुप्पा हुन्छ । टिमुर पाक्दा रातो रंगको हुन्छ । फलको स्वाद पिरो, टर्रो, जिब्रो परपराउने खालको हुन्छ ।
जैविक वर्णन वर्गिकरण :
बैज्ञानिक नाम ( ल्याटिन नाम) : जान्थोजाइलम अर्मेटम (Zanthoxylum armatum DC)
संस्कृत नाम : तुम्वरु, तीक्ष्णफल, तीक्ष्ण पत्र र तीक्ष्णवल्क
अन्य नाम : तामाङ्गमा ‘प्रुमो’, नेवारीमा ‘टेबू’
जापानी नामः किनोमे(kinome)
वनस्पति परिवार : रुटेसी (Rutaceae)
क) बिउबाट विरुवा उत्पादन
राम्ररी रातो भई पाकेको फललाई असोज कात्र्तिक महिनामा टिपी छहारीमा सुकाई
बाहीरको बोक्रा सफा गरि कालो गेडामात्र फाल्गुन चैत्र महिनामा तयारी ब्याडमा राख्नु पर्दछ
। टिमुरको अंकुरण प्रतिशत ज्यादै कम हुन्छ ।
ख) बिरुवा रोपणः
२ देखि ३ मिटर को फरकमा ३०××३० से.मी को खाडल खनी
३– ४ कि.ग्रा राम्ररी पाकेको गोबरमल मोटो मिसाई खाडल पुरेर राख्नु पर्दछ ।
ग) हेरचाह :
बिरुवा रोपी सकेपछि बिरुवा खाडलमा पानी जम्न दिनु हुदैन । बर्षमा २ पटक वरपरको
झाडी सफाई गरी मल हाल्नु पर्दछ । नया“ मुनामा लाहिकिरा र ऐजेरुले सताउन सक्छ ।
बिरुवा रोपेको चौथो बर्ष देखी नै फल फल्न थाल्दछ । राम्रो हेरचाह भएमा सातौ–
आठौ बर्ष देखी पूर्ण उत्पादन लिन सकिन्छ । वयस्क बोटमा १० देखी १५ के.जी सुकेको सरदर
उत्पादन लिन सकिन्छ । बजारमा प्रति के.जी ५०० देखि ८०० सम्ममा बिक्री भै रहेको छ ।
यसरी हेर्दा प्रत्येक वर्ष वयस्क बोटबाट अहिलेको दररेट अनुसार पनि १०,०००।– आम्दानी
लिन सकिन्छ । राम्रो स्याहार पाएमा १५ देखी २० बर्ष सम्म आम्दानी लिन सकिन्छ ।
परम्परा देखी नै मसला र आयुर्वेदिक औषधीको रुपमा प्रयोग हुदै आईरहेको छ ।
बिश्व बजारमा बोक्रा लगाएत यसको तेलको पनि राम्रो बजार छ । यसको बोक्राबाट २.३–
८ प्रतिशत सम्म सुगन्धित तेल प्राप्त हुने गर्दछ । यसको बजारीकरणमा कुनै समस्या छैन ।
महाभारत पर्वतको आसपासको क्षेत्रमा यसको खेती राम्रो सम्भावना छ । ग्रामिण
किसानहरुको आयस्तर बृद्धि गर्न यसको ठुलो भूमिका हुनेछ । हाम्रो हावापानीमा प्राकृतिक
रुपमा नै फैलिरहेको छ । खेर गएको जमिन, ढिक, काल्ना, पाखोमा लगाई आम्दानी लिन
सकिन्छ । भौगोलिक बिकटता भएपनि बजार पु¥याउन हतारो गर्नु पर्दैन । अर्को सजिलो पाटो
त के भने खेतीका लागि त्यती धेरै सिपको आवश्यकता पर्दैन त्यसैले आयातित विदेशी
बिरुवाहरु भन्दा स्थानीय स्तरमा भएको बिरुवालाई नै संरक्षण गरी मनग्य आम्दनी गरौ ।
स्रोत : याग्रो मार्ट प्रा लि
१८ जेठ काठमाडौं । गत चैत्र ४ गते बीमा समितिले…
लोकप्रिय नाराको रुपमा कृषिको व्यवसायिकरण गर्ने भन्ने सरकारको संयन्त्रले कसरी…